पूर्वराजा बनेर एकछिन कल्पिंदा… – रमेश ग्रहण – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
३ आश्विन २०७७, शनिबार ०१:३३ English
पूर्वराजा बनेर एकछिन कल्पिंदा… – रमेश ग्रहण
देशलाई नाइजेरियाजस्तो बनाउन लागिसके । हाम्रा हुंदाखांदाको सात अक्षरको उत्कृष्ट नामलाई घटाएर दुई अक्षरको बनाइदिए । तर, हामीलाई मान्नेले मानेकै छन्, जयजयकार गर्नेले गरेकै छन् । हामी एउटा दरबारबाट अर्को दरबार सरेको मात्र हो । नारायणहिटी दरबारलाई सङ्ग्रहालय बनाइए पनि त्यहां श्रीपेच, राजदण्ड र असली सिंहासन कहां छ र ? त्यो अस्थायी सङ्ग्रहालय हो, सब हाइपोथेकिटल हो । पुजनीय दाजुभाउजूको वंशनाथ हुंदा हामी पोखरामा थियौं । त्यसकारण यहांहरूको अन्तिम ढुकढुकी महसुस गर्न पनि पाएनौं । भतिज दीपेन्द्रले त्यस्तो हर्कत गर्ला भन्ने हामीले सपनामा पनि सोचेका थिएनौं । अरू व्यहोरा त छानबिन आयोगले सार्वजनिक गरेकै हो । त्यो माधव नेपाल ‘आयोगमा म छुटुंला नि सरकार’ भन्थ्यो, पछि त धोका पो दियो । हामी व्यापारी मान्छे, श्रीपेच धारण गर्ने रत्तिभर इच्छा थिएन, तर दाजुको विरासत त थाम्नैप¥यो, देश अगाडि बढाउनैप¥यो । अकस्मात् आइलागेको त्यत्रो बज्रपातलाई सहेर सङ्कटग्रस्त र शोकाकूल देशलाई हामीले दिशा दिएकै हो, सबैले स्वीकार, समर्थन गरेकै हो । नासलचोकमा श्रीपेच लगाउंदा सबैले दाम चढाएकै हो । शोकमा डुबेर मुस्काउन नसक्दासमेत आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा गर्नु नै थियो, गरियो । जङ्गलमा बसेर आतङ्क मच्चाइरहेका माओवादीहरू भन्थे, ‘यो सिक्किम बनाउने खेल हो र हामी लेन्डुप दोर्जे हौं ।’ हामी भागेका छैनौं, नेपालमै छौं, नेपाल सिक्किम भयो त ? बरु अहिले उनीहरूले नै पो सिक्किम बनाउन खोज्दै छन् ।
हाम्रा पुर्खा बडामहाराजा पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको यो देश र जनताको रक्षा गर्न हामीले के गरेनौं ? हाम्रा देशभक्त होनहार सल्लाहकार–सेवकहरूको पहलमा हामीले भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने अभियान चलायौं, गिरिजाप्रसादलाई प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्न लगायौं, प्रजातन्त्रको रक्षा र सुशासन कायम गर्न शेरबहादुरलाई दुई÷दुईपटक मौका दियौं । तर, अक्षम भएपछि कसको के लाग्छ ? बाध्य भएर माघ १९ को कदम हामीले चाल्नुप¥यो । ‘आफैं नमरी स्वर्ग देखिंदैन’ भन्ने ठानी हामीले सो ‘रिक्स’ मोलेका थियौं । देशको दुरावस्था देखेर हैरान भई हामी सक्रिय भएका थियौं । माओवादी समस्या हल गर्नका लागि संसदीय व्यवस्थालाई समाप्त पार्न सहकार्य गरौं भनी सत्ताका लागि युद्ध छाडेर आउन हामीले हरियो बत्ती देखाएकै थियौं । कुरा मिल्ने क्रममा थियो तर कसले भांजो हालिदियो उनीहरू बिच्किएर कोइरालाको पछि पो लागेछन् ।
भ्रष्टाचारले आक्रान्त जनताको मनशान्तिका लागि शाही आयोग गठन ग¥यौं, पत्रकारहरूको हकहितका लागि राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घ बनायौं, राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक पास हुन दिएनौं, पितृ र आमाको शान्तिका लागि हामी देश दौडाहामा पनि पसिना चुहाइचुहाई गयौं, जनताका पीरमर्का नजिकबाट सुन्यौं । त्यस्तै भारतमा रहंदा चीन पनि सार्कमा रहनुपर्छ भन्ने आंट ग¥यौं, अथाह रोजगारीको माहोल मिलाउन अरबतिर गयौं, प्राकृतिक सम्पत्तिलाई पुंजीमा रूपान्तरण गरी आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्यले अफ्रिकासम्म पुग्यौं । के मात्र गरेनौं हामीले ? हरक्षेत्रका स्वच्छ छविहरूलाई छानीछानी मन्त्री बनायौं, इतिहासको सम्मान गर्न थापाहरूलाई उच्च स्थान दियौं, कीर्तिनिधि विष्टलगायतका इमानदार र नैतिकवान् व्यक्तिहरूलाई सहायक बनायौं, जनता भड्काएर जनतालाई नै दुःख दिनेहरूलाई नियन्त्रणमा राख्यौं, सामाजिक–सांस्कृतिक परम्पराहरूलाई झन् बलियो बनायौं, राष्ट्राध्यक्ष तथा कार्यकारी भूमिका एकसाथ निर्वाह ग¥यौं । देश चलेकै थियो, तीन वर्षभित्रै नेपालको मुहार फेरिदिने वाचा गरेकै हो, तर हाम्रो गल्ती कहां भयो ? कसरी भयो ?
अहिले पनि नेपाल र नेपालीको हामीलाई त्यत्तिकै माया छ । नागार्जुनको डांडामा फुर्सद मनाउंदै गर्दा एकान्तपे्रमी पो हुन थालिएछ । तर, देश र जनताको बिजोक देख्दा भने अहिले पनि मन हुंडलिएर आउंछ । छोरा पारस त दूरदर्शी नै हो, भन्थ्यो ‘यी बूढाहरूले देश बिगार्न लागे’ भनेर । ‘मलाई जिम्मा दिनोस् सब ठीकठाक पार्छु’ त भन्थ्यो नि । पत्रिकाहरू पढ्दा, समाचार हेर्दा र शुभचिन्तकहरूसंग बात मार्दा छक्क परिन्छ । यो के भइरहेको छ नेपालमा ? त्यति सुन्दर, शान्त, ठण्डा नेपालमा अहिले अशान्ति, अराजकता र गर्मागर्मी चर्केको छ । गालीगलोज ग¥या छन्, सराप्या छन्, खुट्टा तानातान ग¥या छन्, तं ठूलो कि म ठूलो भन्या छन्, हरे… । सबै छाडेर चुपचाप बस्दा पनि हामीलाई प्रतिगामी भन्न छाड्या छैनन् । पछिपछि लागेर सोध्न आउंछन्, केही बोल्यो कि धम्की दिन्छन् । हिजोका दिनमा ढाड देखाउन नसक्ने, मुन्टो उठाएर आंखा जुधाउन नसक्नेहरू आज चोरीऔंला तेस्र्याएर तर्साउन खोज्छन् । ओरालो लागेका हरिणको चालजस्तो, यो त अति भो । हामीले चाहेको पूर्ण प्रजातन्त्र कहां यस्तो थियो ? यो पनि कुनै लोकतन्त्र हो ?
खैर जे होस्, टुलुटुलु हेरेर रहने बेला छ, सहनै पर्ला । देखिने र सुनिने बेला फेरि पनि त आउला । उमेर छंदै छ, सबैले चिनेकै छन्, ठाउंठाउंमा स्वागतसत्कार भएकै छ, राजषी ठांट कम भएजस्तो लाग्दैन । चिन्ता गर्नुपर्ने खासै केही छैन । अहिले दलका नेतावालाहरूको हालीमुहाली भए पनि विगतमा यिनको हविगत र औकात हामीले देखेकै हो । जनप्रतिनिधि भन्छन्, आफू–आफू नै मारामार गर्छन् । इस्पातको शरीर भएको हामीलाई ‘च्यालेन्ज’ दिने गिरिजाप्रसादलाई अब बेहोर्नुपर्दैन । संसद् पुनस्र्थापना गर्न लगाएर दाजुको आदर्शविपरीत उनले ‘राजतन्त्र समाप्त भो गद्दी छोड्नोस्’सम्म भने । हाम्रो खान्दानमै यत्रो धोका पाएको थाहा छैन । बरू संस्थापक सन्त कृष्णप्रसादले धर्म छाडेनन् । खुमबहादुरले महायज्ञमा हामीलाई माला लाएकै हो, तारानाथको चिन्ता गर्नैपरेन, बीपीका छोरा प्रकाश र नातिनी मनीषाको टन्टै भएन । अनि विजय गच्छदार, कालीबाबा, पाइलटबाबा र भाजपाका राजनाथ सिंह हिन्दू राष्ट्रकै पक्षमा छन् । ८५ प्रतिशत नेपाली जनता हिन्दू छन् भने यो हिन्दू राष्ट्र नभएर के हो त ? त्यसैले हामी पनि पूर्व होइन वर्तमान हिन्दू हौं ।
त्यसैले हामीलाई लाग्छ– बिस्तारै मैदान खाली हुंदै छ । जनता क्रमशः कथित लोकतन्त्र र लोकतन्त्रकामसिहाहरूसंग निराश हुंदै छन् । गणतन्त्रमा जीउधनको सुरक्षा नहुने, विकास नबढ्ने, भ्रष्टाचार झन् मौलाउने, राजनीतिक स्थिरता पनि नहुने, महंगी, बेरोजगारी अझ बढ्ने, उत्पादन गुण्डागर्दी हुने, हकअधिकार स्वतन्त्रता मासिंदै अस्तित्वको खतरा रहनेजस्ता शिक्षा जनताले पाइराख्या छन् । नियम, कानुन, सत्ता सबै अस्थायी छन् । हजारवटा नसल्टने समस्या आफैं निकाल्छन् अनि नयां संविधान बनाउने गफ दिन्छन् । सेनालाई चिन्या छैनन्, समायोजनको कुरा गर्छन् । जागिर खांदा सैनिकले कस्तो शपथ खान्छन् बुझ्नु छैन, परमाधिपति भइसक्यालाई एक्ल्यायौं भन्ठान्छन् । अनमिनलाई खूब आफ्नो ठान्या छन्, दङ्ग छन्, पछि चिन्छन् छेपारो भनेर । नयां संविधान बनिनै हाले पनि त्यसपछिको परिणाम यिनलाई के थाहा ? कसरी जेठ १४ मा संविधान देलान्, हामी पनि हेरौंला ।
सत्चितशमशेरहरू मरेर गए पनि हामीलाई चाहनेको यहां कमी छैन । केही अवसरवादीले चाहिं विगतमा हामीलाई उचालेकै हुन् । तिनले फाइदा पनि लिनसम्म लिए । अहिले विदेशी शक्तिहरूले नेपाललाई बेसक्याम्प बनाउन लाग्दा पनि तिनीहरू मौन बस्या छन् । हामीलाई शिखण्डी बनाएर गणतन्त्रवादी भएका छन्, लोकतन्त्रका प्रवक्ता भएर हिंड्या छन् । कहिलेकाहीं त हांसो पनि उठ्छ, कति नाटक गर्न जानेका यिनले ? हामी नरहे देश रहंदैन, हाम्रो भूराजनीतिक अवस्था नै विचित्रको छ भन्ने जान्दाजान्दै हाम्रो पक्षमा बोल्न किन यिनीहरू कांपिरहेका होलान् ? यो अवस्थामा नबोले कहिले बोल्छन् यिनीहरू ? गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको सवालमा जनमत सङ्ग्रह गरिनुपर्छ भनेर बिचरा कमल थापा वैधानिक रूपले हाम्रा लागि लडिरहेको छ, आन्दोलन एक्लै गरिरहेछ । यो हाम्रा लागि सानो ऋणको भार होइन । हाम्रो सपना पूरा भई ‘ह्याट्रिक’ गरिएछ भने उसको ऋण अवश्य चुक्ता गर्नेछौं ।
हामी भित्र–बाहिर भइरहनु कुनै असम्भव कुरा होइन । रणबहादुर शाह, हजुरबुबा त्रिभुवन अनि कम्बोडिया, जापान, बेलायत, स्पेनका इतिहास पढ्नुपर्छ । अनि थाहा हुन्छ राजतन्त्रको उचारचढावका कहानीहरू । सन् १९१८ को रुसको जारको घटनाबाट हामी अलिक सतर्क थियौ“ । तत्कालीन परिस्थितिमा जनताको मन नदुखाउन मात्र हामी पाखा लागेका थियौ“ । धेरैले यसलाई हाम्रो कमजोरी ठानेछन् । सम्मानित भएर बस्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हामीलाई सङ्केत गरेकै थियो, जनचाहना पनि त्यही थियो । पशुपतिनाथमा छिर्न नदि“दा हामीहरूस“ग सोनिया गान्धी अलि रिसाइछिन्, क्रिश्चियन मिसनरीले हाम्रो डाहा गरेको पनि सत्य हो । सायद त्यही भएर सानो गल्तीमा पनि हामीले कठोर सजाय पाइराख्या छौ“ । तर, हामी देश र जनता जनार्दनको सेवा गर्न चाहन्छौ“ । यो सा“चो हो कि हामी धैर्य गर्न जान्दछौ“ नत्र धेरै पहिला नै धेरै थोक हामीले गरिसक्थ्यौ“ ।
२७ श्रावण २०६९, शनिबार १३:४० मा प्रकाशित